Repoblikan'i Kipra - Wikipedia
06 Jul 2010 - 06 Oct 2018
Ny Repoblikan'i Kipra dia firenena mpikambana amin'ny Vondrona Eoropeanina arỳ antsinananan'ny Ranomasina Mediteranea.
Tamin'ny taona 1974, ilay silaka avaratran'ilay nosy eo avelan'ny tsipika maintso, lasan'ny torkia sy teneniny hoe an'azy. Lasa Repoblika hafa io amban'ny anarana Repoblika Torkan'i Kipra Avaratra. Nihiditra tao anatin'ny faritra Euro ny Kipra tamin'ny 1 Janoary 2008
Ekonomia[hanova | hanova ny fango]
Ny Kipra no faritany tena manana arena indrindra tao anatin'ny firenena 10 nihitra tao anatin'ny firaisana Eoropeanina tamin'ny 2004, ny PIB/olona iray-ny dia 18.900 €
Tamin'ny taona 2007, ny fitsongan'ny ekonomia dia manakainin'ny 4,4 % ny isan-olona tsy miasa 2,2 % sy fiakaram-bidy fiainana 2,2 %. Kanefa ny Kipra dia tsy ao ivelan'ny fanakorontanana ekônomika misy eto an'tany. i Charilaos Stravrakis niteny tamin'ny taona 2007 hoe ny fitsongan'ny ekonomia nihidina 3,5% isa-taona.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Repoblikan%27i_Kipra&oldid=767351"
Voaova farany tamin'ny 12 Martsa 2015 amin'ny 10:11 ity pejy ity